सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट सँग स्क्रिनमुनि फिंगरप्रिन्ट रिडर हुन सक्छ ग्याजेट समाचार
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट सँग स्क्रिनमुनि फिंगरप्रिन्ट रिडर हुन सक्छ
रुबेन गेलार्डो | | मोबाईलहरू
आईफोन एक्सले स्क्रिनमुनि फिंगरप्रिन्ट रिडर बोक्ने आशा गरिएको थियो; सट्टा यो "अनुहार आईडी" को रूपमा बप्तिस्मा गरिएको नयाँ प्रविधिमा शर्त लगाउने निर्णय गरिएको छ। सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट also ले पनि यस सम्भावनालाई शर्त लगाएन र राख्यो - सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 मा - क्यामेराको छेउमा पाठक। यो एकदम सम्भव छ कि कोरियाई अब यो फिचरको साथ टोली सुरू गर्ने पहिलो होइन; को म Xplay7 जीवित छु ती मध्ये पहिलो हुनेछ। जे होस्, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स राक्षस नयाँ प्याटेन्ट छ। र यसले स्क्रिन मुनि फिंगरप्रिन्ट रिडरलाई जनाउँछ।
लाग्छ कि मितिहरू पहिले नै केहि हदसम्म निष्पक्ष छन् यस समाधानको लागि सामसु'sको फ्ल्यागशिपहरूको पहिलो पुग्न, ग्यालक्सी S9। यसको सट्टामा, तपाई यसलाई फेरि अगाडिबाट पत्ता लगाउन बाजी लगाउन सक्नुहुन्छ, यद्यपि एउटा त्रुटिसहित: उपकरणको तल एक टापु सिर्जना गर्न सकिन्छ, नयाँ एप्पल मोबाइल जत्तिकै।
भर्खरको सामसु p प्याटेन्टका अनुसार, पर्दा मुनि नयाँ फिंगरप्रिन्ट रिडर प्रेसर सेन्सर हुनेछ। त्यो हो, त्यहाँ पर्दा को भागहरू हुनेछ कि प्रयोगकर्ता प्यानल मा एक कार्य पूरा गर्न सामान्य भन्दा कडा थिचेको भनेर मान्यता हुनेछ।
अर्कोतर्फ, हामीले पहिले नै भनेझैं, मितिहरू २०१ technology को सुरूमा यस प्रकारको टेक्नोलोजी कार्यान्वयन गर्न धेरै नजिक छ। तर यदि हामीले शरद launतु सुरूवातमा हाम्रो दृश्य राख्छौं भने, हामी सम्भव सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट find पाउँछौं, एक उच्च-अन्त मोडेल जसले यो नयाँ सामसु design डिजाइन समावेश गर्दछ। अब, यो सम्भव छ कि सामसु'sको रोडम्याप एप्पलको जस्तै छ: अधिक सटीक र छिटो अनुहार पहिचान टेक्नोलोजीमा शर्त। के अधिक छ, डच पोर्टल अनुसार ग्यालक्सी क्लब, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 यसको आईरिस मान्यता को शुद्धता सुधार गर्न यसको फ्रन्ट मा एक3डी सेन्सर एकीकृत हुनेछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट सँग स्क्रिनमुनि फिंगरप्रिन्ट रिडर हुन सक्छ
व्हाट्सएप तपाईका लागि काम गरिरहेको छैन? तपाई एक्लो हुनुहुन्न, व्हाट्सएप डाउन छ
Tesla कम घण्टामा, करोडपति घाटामा र यसको टेस्ला मोडेल of को कारण